Shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay duleedka Muqdisho. -News and information about Somalia
Home News Shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay duleedka Muqdisho.
Shil sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay duleedka Muqdisho.
Shil gaari oo geystay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta waxaa uu ka dhacay deegaanka Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho.
Shilka ayaa si gaar ah waxaa uu uga dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn xerada tababarka ciidanka dowladda Turkigu ay ku leedahay Muqdisho laguna magacaabo Turki-Som.
Shilka ayaa yimid kaddib markii ay isku dhaceen gaari ah nooca loo yaqaano Carro gadiyaha iyo mooto Bajaaj.
Shilka ayaa waxa ku nafwaayay hal qof oo dumar ah, taasi oo saarneed mootada iyadoo uu dhaawac saagaaray wadihii Mootada, sida ay goobjoogayaal u sheegeen Warkii Online.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada amaanka ay gacanta ku dhigeen darawalkii ka xeynayay gaariga weyn ee ku dhacay Mootada.
Previous articleYaa Xaq u leh oo hoggaaminaya Galmudug (Ma Aqlabiyad Mise Muran Badni)?
Next articleSAWIRO:-Sheekh Shaakir oo la kulmay saraakiisha Ciidamada amarna siiyay